Thalassemia Hemoglobin E (ခေါ်) သွေးအားနည်းရောဂါ အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မီကုထုံးနည်းသစ် - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
အောက်တိုဘာ 29, 2018 Pornchanok Iamsirirak, M.D. Professor Suradej Hongeng, M.D.
(၁၀)နှစ်သမီးလေး ကန်ရာဖတ် ကျန်ကွန်မီ (ခေါ်) ‘တုန်ခေါင်’
ကျွန်မ၏ သမီးဖြစ်သူ တုန်ခေါင်သည် Thalassemia Hemoglobin E (ခေါ်) သွေးအားနည်းရောဂါတစ်မျိုးကို ခံစားနေခဲ့ရသည်။ ထိုရောဂါကြောင့် သူမ၏ ကျန်းမာရေးမှာ အလွန်ချူခြာပြီး အမြဲလိုလို အားအင်မရှိခဲ့ပေ။အသက်အရွယ် (၅)နှစ်ခန့်၌ သူမ၏ အရိုးကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးမှုများသည် ထိုအသက်အရွယ်၌ ရှိသင့်ရှိ ထိုက် သည့် ဖွံဖြိုးမှု မရှိဘဲ ကိုယ်ခန္ဓာ သေးငယ်နေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေများကြောင့် သူမကိုယ်ခန္ဓာ ဆက်လက်ဖွံ့ ဖြိုးကြီးထွား စေနိုင်ရန်အတွက် သွေးစသွင်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် သူမ၏ ပထမဆုံးအကြိမ် သွေးသွင်းခြင်းကို စတင် ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့သွေးသွင်း ရသည့်အခါတိုင်း သွေးအိတ် (၁)အိတ်ခွဲမှ (၂)အိတ်ထိ လစဉ်ပုံမှန် သွင်းသွားရခဲ့ရပါသည်။
တုန်ခေါင်သည် မိမိ၏ မိသားစုတွင် တစ်ဦးတည်းသော သမီးဖြစ်ပြီး မွေးချင်းမောင်နှမ မရှိသည့်အလျောက် ကျွန်မတို့သည် သူမခံစားနေရသော ရောဂါဝေဒနာမှ အရှင်း ပျောက်ကင်း သက်သာစေ လိုကြသည်။ ကုသမှုနှင့် စပ်လျင်းသော နည်းလမ်းရှာဖွေ မှုများတွင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ သင့်တော်သောStem cell အလှူရှင် ရှာဖွေတွေ့ရှိ နိုင်ရန်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီ အသင်းကို စုံစမ်းဆက်သွယ် ခဲ့ကြပါသည်။ ကံအ ကြောင်း မသင့်သောအခါ တုန်ခေါင်နှင့် (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်းတူသည့် HLA tissue မျိုးကို မည်သည့် အလှူရှင်ထံမှ ရှာမတွေ့ခဲ့ပေ။
၂၀၁၅ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ကျွန်ပ်တို့၏ ကုသမှုနည်းသစ် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအရ တစ်ခု မှာ မိဘ၏ရိုးတွင်းခြင်ဆီထဲမှ Stem cell များကိုယူပြီး သားသမီးများတွင် အစားထိုး ကုသခြင်း အကြောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မ၏ HLA tissue နှင့် တူညီမှု မရှိပေသော်လည်း သူမ၏ ဖခင်နှင့် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုက်ညီမှု ရှိသောအခါ ကျွန်မတို့ မိသားစုဝင်များအတွက် မျှော်လင့်ချက် သတင်းကောင်းတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသ တင်းကောင်းတွင်Professor Suradej Hongeng, M.D. ဦးဆောင်မှုဖြင့်ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီး၏ အားပေး ကူညီမှုဖြင့် ကျွန်မတို့သည် ဆေးကုမှုနည်းလမ်းသစ် အဆင့်ဆင့်ကို နားလည်သိရှိခဲ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်မတို့ မိသားစုသည် ဤကုသမှု နည်းသစ် အတွက် လျင်မြန်စွာ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရန် မဆိုင်းမတွ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါသည်။တုန်ခေါင်လေးသည် ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ကုသမှုစတင်ရာ၌ မတ်လနှင့် ဧပြီလအတွင်း Chemo ဆေးကုသမှု (၁၀)ကြိမ် ယူခဲ့ပါသည်။ သူမသည် ၂၅ရက်မေလ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၈ရက် ဇွန်လ၊ ၂၀၁၅ခုနှစ် အထိ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ Stem cell အစားထိုး ကုသမှုကို ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကြီးတွင် တက်ရောက်ဆေးကုသမှု ခံယူခဲ့ပါသည်။ထိုသို့ သူမဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံယူနေစဉ် ဆေးရုံ၌ရှိသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း အဖွဲ့သားများ အားလုံး၏ အလေးထား တာဝန်ယူ ဂရုစိုက်ပေးခြင်းများ၊ ကုသမှု အ ဖက်ဖက်၌ ကြိုးစားစွမ်းဆောင်သွားမှုများအပေါ် မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ကြုံခံစား ခဲ့ရ ပါသည်။ ကုသမှုအဆင့်တိုင်းတွင် ကုသမှုမတိုင်မှီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမည့် အစီစဉ်များကို ပုံမှန်ဆွေးနွေးတင်ပြ၍ ပြည့်စုံစွာ ရှင်းပြပြီးမှသာလျှင် ဂရုတစိုက် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မတို့ ၏မိသားစုအနေဖြင့် ဤသို့ အဆင့်မြင့် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင် ပေးထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်ကြီးများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ကုသမှု အဆင့်ဆင့်များကို အကြောင်းကြား တင်ပြနိုင်မှုအပေါ် အလွန်ပင် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
ထိုနည်းတူကုသမှု ခံယူနေစဉ် နေရ သည့် လူနာ၏အခန်း၌ ခေတ်နှင့်အညီ သက်သောင့်သက်သာစွာ ပြင်ဆင်ထားပြီး ကျယ်ဝန်းလှ၍ တုန်ခေါင်လေးနှင့် ကျွန်မတို့မိသားစုအတွက် အဆင် ပြေစွာဖြင့် နေနိုင်သော အခန်း ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အလွန်နှစ်ထောင်းအားရ ကျေနပ်မိပါ သည်။ရိုးတွင်းခြင်ဆီ stem cell အစားထိုးကုသမှု ခံယူပြီးနောက် တုန်ခေါင်လေးသည် မိမိနေရပ်သို့ပြန်ပြီး တစ်နှစ်အတွင်း နလန်ထူသက်သာလာကာ ယနေ့ချိန်ထိ သာမန်ကျန်းမာ သောသူ တစ်ဦးအဖြစ် စတင်နေထိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ၌ တုန်ခေါင်လေးသည် သက်လုံကောင်းကာ ကျန်းမာနေတော့သည်။ သူမ၏ ကိုယ်ခန္ဓာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် စံချိန်ပမာဏ ရှိသင့်သည့်အတိုင်း တိုးတက်ပြီး မကြာခဏ ဖျားနာခြင်းမျိုး မရှိတော့ပေ။ ထို့ပြင် သူမသည် သွေးသွင်းဖို့ရန်ပါ မလို အပ်တော့ပေ။အချုပ်အားဖြင့် တုန်ခေါင်၏ မိသားစုကိုယ်စား တုန်ခေါင်လေး၏ ကုသမှုနည်းသစ် အတွက် မိဘရိုးတွင်းခြင်ဆီ Stem cells အစားထိုး ကုသမှု အောင်မြင်ခဲ့ သည့်အတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် ဆစ်မီတဝေ့ဆေး ရုံကြီး၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုး ကုသမှု၌ ပါဝင်ကြသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဝန်ထမ်းများ အားလုံးနှင့်အတူ Dr. Suradej Hongeng, Dr. Pornchanok Iamsirirak,ကို အထူးပင် လှိုက်လဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။